प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०४, २०७७ समय: १५:४३:४७
सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा सम्पन्न तेस्रो वी.पी. कोइराला स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा नेपाली सेनाले २ स्वर्ण सहित ४ पदक जितेको छ । कोशी महोत्सवको अवसर पारी आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा सेनाले महिला तर्फको ५५ र ६५ केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेको हो ।
सेनाको लागि सिवाङगी दुवे र सुशीला चन्दले स्वर्ण दिलाएका हुन् । पुरुष तर्फको प्रतिष्पर्धामा भने सेनाले एक रजत र एक काश्य जितेको छ । प्रतियोगिता विभिन्न ४ वटा तौल समूहमा खेलाइएको थियो । खेलमा प्रदेश नम्बर ३ र नेपाल प्रहरीले एक÷एक वटा स्वर्ण जितेको छ । दुवैले थप एक÷ एक काश्य पदक जितेका छन् ।
प्रतियोगितामा प्रदेश नम्बर १ ले दुई रजत सहित ४ पदक जितेको छ । प्रदेश नम्बर ५ ले एक रजत र एक काश्य जित्दा ६ नम्बर प्रदेशले दुई काश्य जितेको छ । राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगितामा दुई बिभागीय टिम नेपाल पुलिस र नेपाली सेनाले सहभागिता जनाएको थियो । प्रदेश तर्फ भने ४ र ७ नम्बर बाहेकका खेलाडीले प्रतिष्पर्धा जनाएको कार्यक्रम संयोजक वशन्त सुवेदीले जानकारी दिए । प्रतियोगिताका बिजयी खेलाडीहरुलाई पूर्व अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहित गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारी र पूर्व राखेप सदस्य शम्भु आचार्यले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । तेस्रो वी.पी. कोइराला स्मृति राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता सृष्टि समाज इनरुवा र कोशी गाउँपालिकाले संयुक्त रुपमा संचालनमा ल्याएको थियो । राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता सम्पन्न भएपनि खेल स्थलमा नेपाल र भारतका नाम चलेका पहलमानहरु बिचको दंगल खेल भने जारी छ ।
इटहरी। नेपाल प्रेस युनियन सुनसरीले दुर्घटना बीमा बापतको रकम हस्तान्तरण गरेको छ । इटहरीका पत्रकार विराट गौतम (अनुपम) लाई ...
इनरुवा । कोरोना संक्रमण दर बढ्दै जाँदा सुनसरीमा स्मार्ट लक डाउनको चर्चा सुरु भएको छ । पछिल्ला दिन संक्रमण दर बढ्दो क्रमम...